Ku raaxayso qaan-sheegashadaada, adigoo soo saaraya qaansheegyada sida ugu dhakhsaha badan uguna fudud
Waqtiga tababarku waa ku dhowaad 30 daqiiqo, waa bilaash, waxaana la socda sawirro qurux badan oo qaab koronto ah.
Way fududahay in la raaco oo dhammaan bilowga waa la soo dhaweynayaa.
Waxaan si joogto ah u siiyaa tababarkan fool-ka-fool ah oo qayb ka ah tababarka bilowga ah ama sii socoshada ee dhagaystayaasha dadka leh mashaariicda abuurista ganacsiga.
Waxaan ka wada hadli doonnaa dhowr qaybood, fikradaha ugu muhiimsan ee ay tahay inay ku jiraan qaansheegtaada: Macluumaadka waajibka ah iyo dheeriga ah, xisaabinta VAT, qiimo dhimista ganacsiga, sicir-dhimista, qaababka kala duwan ee lacag-bixinta, lacagaha hore, lacagaha hoos-u-dhaca ah, iyo jadwalka lacag bixinta.
Waxaan ku dhammeyn doonnaa bandhigga qaab qaansheegad fudud, oo si fudud loo nuqulan karo, si aad si deg deg ah wax uga beddeli karto qaansheegtyadaada cusub oo aad sidaas waqti ugu haysato howlahaaga kale ee baarista ama wax soo saarka ah.
Tababarkan waxaa inta badan loogu talagalay ganacsatada, iyo waliba maamule ganacsi, oo aan ku raaxeysan doonin shaqadan biilasha.
Tababarkan ayaa kaa hor istaagi doona dhibaatooyin badan, gaar ahaan luminta lacagta oo ku xiran qaansheegta aan u hoggaansamin xeerarka ka jira Faransiiska ...
Sida loo sameeyo qaansheegad aan lagaran karin Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ BDES: astaamaha cusub ee 2021?
horeBaro inaad wax ku aqriso in kayar 1 saac
socdaGanacsiga - 7 Maalgashiyo Faa'iido Leh
Horudhac ku saabsan histology: sahaminta unugyada jidhka bini'aadamka
Covid-19: sidee tallaalku uga shaqeyn doonaa shirkadaha?
Foojarka makhaayadaha: shuruudaha isticmaalka oo loo habeeyay illaa Ogosto 31, 2021
Xog-siinta: ma jirto ilaalin shaqaale ah maqnaanshaha anshax xumo dambi oo dhanka shaqada ah